People & Planet – Page3– Trend.com.mm
ချစ်သူသက်တမ်း ၇ နှစ်ကျော် ကြာခဲ့တဲ့ မင်းသမီးချော Lee Ha Nui နဲ့ သူမချစ်သူ » ဆက်ဖတ်ရန် «
Posted in Art/Poems, People & PlanetLeaveaComment on လမ်းခွဲလိုက်ပြီဖြစ်တဲ့ Yoon Kye Sang နဲ့ Lee Ha Nui
Posted on June 9, 2020 June 9, 2020 by Mya Thet
1. Siwon (Super Junior) Super Junior အဖွဲ့ဝင် Siwonရဲ့ ဖခင်ကတော့ Boryung » ဆက်ဖတ်ရန် «
Posted in Art/Poems, People & PlanetLeaveaComment on ချမ်းသာတဲ့ မိသားစုကနေ မွေးဖွားလာတဲ့ K-pop အမျိုးသား အိုင်ဒေါလ်များ
သာမန်လူတွေအလုပ်လုပ်ကိုင်ကြသလိုပဲ K-pop Idols အများစုကလဲ မအောင်မြင်ခင်မှာ စားသောက်ဆိုင်တွေမှာ အလုပ်လုပ်ခဲ့ရတာတွေလဲရှိသလို၊ အနုပညာနယ်ပယ်တွေထဲမှာအလုပ်လုပ်ခဲ့ဖူးတဲ့ အနုပညာရှင်တွေလဲ များစွာရှိပါတယ်။ » ဆက်ဖတ်ရန် «
Posted in Art/Poems, People & PlanetLeaveaComment on မအောင်မြင်ခင်မှာ သူတို့ဘာတွေလုပ်ခဲ့ကြရတာလဲ
၁၉၆၁၊ ၁၉၇၃၊ ၁၉၈၅၊ ၁၉၉၇၊ ၂၀၀၉ ခုနှစ်ဖွားများသည် နွားနှစ်ဖွားများ ဖြစ်ကြသည်။ နွားနှစ်ဖွားတွေရဲ့ စရိုက်သဘာဝကိုကြည့်ရင် » ဆက်ဖတ်ရန် «
Posted in People & PlanetLeaveaComment on နွားနှစ်ဖွားအဟော
ပရိသတ်ကြီးရေ ဒီတစ်ခါမှာတော့ Fans တွေသာမက တခြားပရိသတ်တွေရဲ့ ချစ်ခင်မှုကိုရရှိထားကြတဲ့ ဆယ်လီတို့ရဲ့ သားသားမီးမီးလေးတစ်ချို့ကို ပြောပြလိုက်ပါတယ်။ 1. » ဆက်ဖတ်ရန် «
Posted in Art/Poems, People & PlanetLeaveaComment on ပရိသတ်ရဲ့ အချစ်တော် ကိုရီးယားဆယ်လီသားသမီးများ
အခုခေတ်မှာတော့ ပလတ်စတစ်ဆာရဂျီ လုပ်တယ်ဆိုတာ သိပ်တော့ မဆန်းတော့ပါဘူး။ ဒီလိုမျိုးခွဲစိတ်ပြုပြင်မှုတွေလုပ်ထားတယ်ဆိုတာကိုပြောပြခဲ့ကြတဲ့ သူတွေလဲရှိပါတယ်။ သူတို့ကလဲ တကယ်ကို နာမည်ကြီးတွေပါပဲနော်။ » ဆက်ဖတ်ရန် «
Posted in Art/Poems, People & PlanetLeaveaComment on ခွဲစိတ်ပြုပြင်ထားကြတဲ့ ကိုရီးယားဆယ်လီများ
ဒီဖြစ်စဉ်လေးကတော့ တောင်ကိုရီးယားနိုင်ငံမှာ ဖြစ်ပွားခဲ့တာပါ။ Chungnam Cheonan ရဲဌာနရဲ့ ပြောကြားချက်အရ ၉ နှစ်အရွယ်ကောင်လေးတစ်ဦး ဇွန်လ » ဆက်ဖတ်ရန် «
Posted in Art/Poems, People & PlanetLeaveaComment on မိထွေးဖြစ်သူက ခရီးဆောင်အိတ်ထဲမှာ သော့ခတ်ထားခဲ့လို့ ကလေးငယ်လေးသေဆုံး
၁၈၉၆၊ ၁၉ဝ၈၊ ၁၉၂ဝ၊ ၁၉၃၂၊ ၁၉၄၄၊ ၁၉၅၆၊ ၁၉၆၈၊ ၁၉၈ဝ၊ ၁၉၉၂၊၂ဝဝ၄၊၂ဝ၁၆ ၂ဝ၂၈ခုနှစ်ဖွားများသည် » ဆက်ဖတ်ရန် «
Posted in People & PlanetLeaveaComment on မျောက်နှစ် အဟော
အေဂျင်စီတွေရဲ့ လူရွေးချယ်မှုတွေကလည်းတစ်ခါတစ်လေမှာ အမှားတွေရှိနိုင်ပါတယ်။ ကိုယ်မရွေးချယ်မိလိုက်လို့ နောက်ပိုင်းမှာ အောင်မြင်သွားတဲ့ အနုပညာရှင်တွေကို တစ်ခါတလေကျရင် မရွေးမိလိုက်လေခြင်းဆိုပြီးတော့ နောင်တရတာမျိုးတွေလဲ » ဆက်ဖတ်ရန် «
Posted in Art/Poems, People & PlanetLeaveaComment on YG Entertainment ရဲ့ ငြင်းပယ်မှုကိုခံခဲ့ရတဲ့ ကိုရီးယားဆယ်လီများ
၁၈၉၄၊ ၁၉ဝ၆၊ ၁၉၁၈၊ ၁၉၃ဝ၊ ၁၉၄၂၊ ၁၉၅၄၊ ၁၉၆၆၊ ၁၉၇၈၊ ၁၉၉ဝ၊၂ဝဝ၂၊၂ဝ၁၄ ၂ဝ၂၆နှစ်ဖွားများသည် » ဆက်ဖတ်ရန် «
Posted in People & PlanetLeaveaComment on မြင်းနှစ် အဟော